New Zealand's Auckland ayaa dib ugu soo laabtay ka dib markii COVID-19 koror cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka New Zealand » New Zealand's Auckland ayaa dib ugu soo laabatay ka dib markii COVID-19 cusub ay korortay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
New Zealand's Auckland ayaa dib ugu soo laabatay ka dib markii COVID-19 cusub ay korortay
Raiisel wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern
Saraakiisha dowladda New Zealand ayaa maanta ku dhawaaqay in magaalada ugu weyn wadanka, Auckland, la xiri doono kadib, kadib afar kiis oo cusub oo Covid-19 cudurka la ogaaday.
Raiisel wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay in Auckland ay u dhaqaaqi doonto heer sedex xayiraad ah laga bilaabo duhurkii Arbacada iyada oo ah "taxadar taxadar leh."
Dadku waa inay ka fogaadaan shaqada iyo iskuulka, kulamada in ka badan 10 qofna waa la xaddidi doonaa.
Jidadka ayaa la isticmaali doonaa saddex maalmood illaa Jimcaha.
"Tani waa wax aan u sii diyaarinay," ayuu Ardern u sheegay suxufiyiinta, isagoo intaa ku daray in meesha laga helay fayraska aan la garanayn.
“Waxaan soo marnay 102 maalmood, wayna fududahay inaan dareemo in New Zealand ay duurka ka baxday. Ma jiro waddan u baxay sidii aan sameynay oo aan dib u soo noolayn. Sababtoo ah waxaan ahayn kuwa kaliya, waa inaan qorsheyno. Waana qorsheynay, ”ayey tiri.